Lufthansa waxay si guul leh u dhammaystirtay dhammaystirka kororka raasamaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Lufthansa waxay si guul leh u dhammaystirtay dhammaystirka kororka raasamaalka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Deutsche Lufthansa AG ayaa gabi ahaanba dib u bixisay qaddar dhan 1.5 bilyan oo yuuro oo laga soo qaatay Ka -qaybgalka Aamusan I ee Sanduuqa Xasilinta Dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka (ESF).
Korodhka raasamaalka Lufthansa si guul leh ayaa loo dhammaystiray - saamiyada cusub ayaa la kala iibsanayaa laga bilaabo maanta.
Dakhliga ka soo xarooda kororka raasumaalka ayaa si toos ah loogu shubaa dib u bixinta lacagaha xasilinta ee Sanduuqa Xasilinta Dhaqaalaha Jarmalka (ESF).
Dib -u -bixin buuxda iyo baajinta ka -qaybgalayaasha Aamusan ESF I iyo II ayaa la qorsheeyay ka hor dhammaadka sannadka.
Iyadoo maanta la soo gabagabeynayo kororka caasimadda Deutsche Lufthansa AG ayaa gabi ahaanba dib u bixisay qaddarkii 1.5 bilyan oo yuuro oo laga soo qaatay Ka -qaybgalka Aamusan I Sanduuqa Xasilinta Dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka (ESF). Tan, Deutsche Lufthansa AG waxay dejisay qayb weyn oo ka mid ah tallaabooyinka xasilinta ee hadda muuqda ESF. Dib -u -bixinta ayaa si aad ah loo sameeyay ka hor intii markii hore la qorsheeyay.
Carsten Spohr, maamulaha Deutsche Lufthansa AG
Dakhliga guud ee kororka caasimadda wuxuu gaaray 2.162 bilyan oo yuuro. Saamiyada cusub waxaa lagu kala iibsanayaa sarrifka saamiyada Frankfurt ilaa maanta. Kordhinta raasamaalka sidaas darteed waa la dhammaystiray.
Carsten Spohr, maamulaha guud Deutsche Lufthansa AG wuxuu leeyahay,
“Aad baan uga mahadcelineynaa taas Deutsche Lufthansa AG waxaa lagu xasiliyey lacag cashuureed waqtiyadii ugu adkaa. Tani waxay suurtogal ka dhigtay in la badbaadiyo in ka badan 100,000 oo shaqo lana sugo mustaqbalka. Maanta, waxaan fulinaynaa ballan -qaadkeenna waxaanna dib u bixinaynaa qayb weyn oo ka mid ah lacagihii xasilinta waqtiyadii la filayay. Waxaan aad ugu kalsoonahay mustaqbalka. Dalal badan ayaa furaya xuduudahooda, waxaana maalin walba sii kordhaya baahida loo qabo socdaalka hawada, gaar ahaan kuwa socdaalayaasha ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, jawiga shirkadaha diyaaradaha ayaa weli ah mid dhib badan. Taasi waa sababta aan u joogteynno inaan sii wadno isbeddelkeenna. Hadafkayagu wali isma beddelin: Kooxda Lufthansa waxay sii wadi doontaa inay difaacdo booskeeda 5 -ta kooxood ee ugu sarreeya diyaaradaha adduunka. ”
Ka dib bixinta maanta ee Kaqaybgalka Aamusan I, Shirkaddu waxay kaloo damacsan tahay inay si buuxda u bixiso Ka -qaybgalka Aamusan II ee 1 bilyan oo yuuro kahor dhammaadka 2021 iyo inay joojiso qaybta aan la adeegsan ee Ka -qaybgalka Aamusan I sidoo kale ka hor dhammaadka 2021. 1 bilyan oo yuuro ayaa mar hore dib loo bixiyay intii la qorsheeyay (Febraayo 2021). ESF, oo hadda haysata 14.09% raasumaalka saamiga, ayaa ballanqaaday inaanay iibin wax saamiyada shirkadda ah lixda bilood ka dib dhammaystirka korodhka raasumaalka. Si kastaba ha ahaatee, iibinta saamiga waa in la dhammaystiraa ugu dambayn 24 bilood kadib marka la dhammaystiro kordhinta raasumaalka, waa haddii Shirkaddu ay dib u bixisay Ka -qayb -galayaasha Aamusan I iyo II sidii loo qorsheeyey iyo in la buuxiyo shuruudaha heshiiska.